Addis Ababa : shirweynaha ganacsiga ee Shiinaha iyo Afrika oo ka furmay – AwKutub News
Addis Ababa : shirweynaha ganacsiga ee Shiinaha iyo Afrika oo ka furmay
Leave a Comment on Addis Ababa : shirweynaha ganacsiga ee Shiinaha iyo Afrika oo ka furmay
Caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa waxa ay martigelineysaa Shirweynaha Ganacsiga ee Shiinaha iyo Afrika oo maanta ka furmay halkaasi.
Shirkado ka socda dalka Shiinaha oo ka soo qeyb galay Shirweynahan ayaa la filayaa in ay xiriirro la sameeyaan dhiggooda Itoobiya iyo guud ahaan dalalka Afrika.
Rugta Ganacsiga ee Itoobiya iyo guddiga xogheynta ee soo agaasimaya Shirweynahan ayaa sheegay in hadafka shirweynaha uu yahay xoojinta wadashaqeynta ka dhexeeysa labada dhinac si loo kordhiyo kobaca dhaqaalaha iyo maalgashiga.
Hadafka dowladda Itoobiya ay ku soo jiidaneyso maalgashadayaal shisheeye ayaa la jaanqaadaya qorshaha Itoobiya ay ku dooneyso in ay noqoto xarunta warshadaha Afrika wixii loo gaaro 2025-ka.
Maalgashiga shirkadaha Shiinaha ay ka hirgaliyeen Itoobiya sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxay ka qeyb qaateen kordhinta kobaca dhaqaalaha Itoobiya.
Sida uu sheegay guddiga dhaqaalaha iyo maalgashiga, dowladda Itoobiya waxay sanadkii la soo dhaafay oo kaliya ruqsad ganacsi siisay in ka badan 1290 mashruuc oo maalgashi ah oo ay fulinayaan shirkado Shiinaha laga leeyahay.
Guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo maalgashiga, Mekonen Hailu ayaa sheegay in 24% dhaqaalaha kasoo xerooda shatiyada maalgashiga ay ka soo galaan shirkadaha Shiinaha laga leeyahay.
“Dhaqaalaha Shiinaha uu ku bixinayo Itoobiya waa midka ugu ballaaran guud ahaan maalgashiga Shisheeye ee Itoobiya lagu bixiyo” ayuu yiri Mekonon.
Tags: Addis Ababa Geeska Afrika Itoobiya Shiinaha shirar Wararka
Previous Entry Aqalka Sare oo sheegay in lasoo afjaray khilaafkii Dawladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada
Next Entry Sawirro : Guddoomiyaha Jabhada ONLF Oo Soo Gaaray Dalka Itoobiya